स्वास्थ्य र स्वाद : रमजानमा खानपान यस्तो राम्रो
Thursday, 8 Jun, 2017 3:59 PM
मुस्लिम समुदायको सबैभन्दा ठूलो चाड रमजान चलिरहेको छ । एक महिनासम्म चल्ने रमजानको धार्मिक नियम निकै कडा हुन्छ । दिनभर भोको बस्नुपर्छ, यसलाई रोजा भनिन्छ । सूर्यास्तपछि मात्रै खाने चलन छ । तर, दिनभर खाली रहेको पेटमा एक्कासी जस्तोपायो त्यस्तै खाना पर्दा स्वास्थ्यमा समस्या निम्तिन सक्छ । रमजानको समयमा कस्तो खानपाने गर्ने भन्नेबारे कमै जानकार हुन्छन् । स्वास्थ्य र स्वाद दुवैलाई उपयुक्त हुने गरी खानपान गर्न चिकित्सकले सुझाव दिएका छन् :
फलफूल र सलाद खानुहोस्
रोजा सकिएपछि सुरुमा केही फलफूल खानु राम्रो हुन्छ । केरा, खरबुजाजस्ता ताजा फलफूल सेवन गर्दा शरीरमा पानीको मात्रा पनि मिल्छ । फलफूले भोको शरीरलाई दागत दिन्छ । योबेला पानी पिउनुभन्दा पनि फलफूलमै जोड गर्नु राम्रो हो । काँक्रा र गाँजरको सलादले पनि राम्रो गर्छ । यि चिजमा पानीको मात्रा राम्रो पाइन्छ । सीधै पानी पिउँदा फाइदा गर्दैन ।
भाको पेटमा तत्काल धेरै पानी पिउँदा पनि फाइदा गर्दैन । फलफूल र सलादको पानी बिस्तारै शरीरभर सञ्चार भएर उर्जा प्रदान गर्छ ।
कोल्ड ड्रिंक्समा मन नलैजानुहोस्
पहाडी क्षेत्रमा भन्दा तराईमै मुस्लिम समुदाय बढी छन् । तराईमा अहिले उखरमाउलो गर्मी छ । त्यसैले रोजा सकिएपछि कोल्ड ड्रिंक्स पिउने चलन पाइन्छ । गर्मीमा चिसोले केहीबेर राहत दिएपनि रक्तसञ्चारमा असर पारेर मुटुमा खतरा निम्त्याउन सक्छ । धपडीले गलेको शरीरमा एक्कासी धेरै चिसो पिउन राम्रो होइन । फ्रिजमा राखेको पानी पनि नपिउनुहोस् ।
चिल्लो, पिरो र मसलेदार त्याग्नुहोस्
दिनभर भोको बस्ने व्यक्तिको शरीरमा पानी र उर्जा कम भइरहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा रोजा सकिएलगत्तै भोक टार्न चिल्लो, पिरो र मसलेदार खाना नै रोज्न मन लाग्छ । भोकपनि मेट्ने र स्वाद पनि दिने भएकाले यस्तो खाना रुचिकर लाग्छ । तर, गर्मी मौसमसमेत भएकाले भोको पेटमा मसलेदार खानाको असर बढी पर्छ ।
मुस्लिम समयुदायमा त चटपटे खालका खाना र मासु खाने प्रचलन छ । भोको बस्दा ग्यास्ट्राइटिसले पनि सताउन सक्छ । यसमाथि मसलेदार खानेकुराले त झन् समस्या थप्छ । माछा–मासुले पनि खासै फाइदा गर्दैन । यस्ता खानाले एसिडिटीको समस्या बढाउने तथा मुटु र नसामा गर्ने खतरा रहन्छ ।
सादा दाल, भात, तरकारी नै ठीक
भोक पनि मेट्न र असर पनि नगरोस् भन्नका लागि सामान्य परिकार नै उपयुक्त हुन्छ । रोटी, दाल, भात र तरकारी नै ठीक हुन्छ । यस्ता खानामा कार्बोहाइड्रेडको मात्रा पनि पर्याप्त पाइन्छ । यसले दिनभरको भोको शरीरलाई उर्जा दिन्छ । सादा खाना पाचन पनि सहजै हुन्छ ।
एकैपटक धेरै नखानुहोस्
दिनभरको भोको पेटले टन्न खाना माग्छ । तर, लामो समयको भोक मेट्न एकैपटक धेरै खाँदा बेफाइदा गर्छ । शारीरिक प्रतिक्रिया उत्पन्न भएर मान्छे बेहोस नै हुनसक्छ । ठोस खानामात्रै होइन, पानी पनि एक्कासी धेरै पिउनु हुँदैन । थोरै खाँदै, आराम गर्दै, पटक–पटक खान सकिन्छ ।
चिया र चुरोट छुँदै नछुनुहोस्
चिया र चुरोट स्वास्थ्यका लागि कहिल्यै राम्रो होइन । खाली पेटमा त झन् बिषै हुन् । रोजा बस्दा थुक पनि निल्न हुन्न भन्ने मान्यता छ । त्यसैले धुमपान गर्ने लत भएकाहरुलाई रोजा सकिएपछि तलतलले सताउँछ । यो बेला चिया र चुरोट खाँदा सामान्य अवस्थामा भन्दा धेरै गुणा बढी असर गर्छ ।
१. रोजालगत्तै फलफूलको रस
२. शरीरलाई केहिबेर आराम
३. केहीबेरमा फलफूल
४. खानामा दाल र तरकारीसँग भात या रोटी
५. खानासँग पानीभन्दा सलादमा जोड
बुटवलको कोरोना अस्पतालमा दुई जनाको मृत्यु : एक संक्रमित, अर्काको पिसिआर रिपोर्ट आउन बाँकी